Dhalinyaro ku howlanaa nadiifinta kabaha ee Addis Ababa ayaa shaqada laga joojiyay - ዜና ከምንጩ
Dhalinyaro ku howlanaa nadiifinta kabaha ee Addis Ababa ayaa shaqada laga joojiyay
Dhalinyaro ay hay’adaha sharciga ee magaalada Addis Ababa shaqada ka joojiyeen, kadib markii lagu eedeeyay inay qurbo-joog ku lug lahaayeen dalka Itoobiya xuska Christmas-ka.
Markii waagu baryay ayay dareentay in aanay jirin wax kabo-sameeyayaal ah oo goobta ku sugan, gaar ahaan xaafadda hoose ee magaalada.
Hal milyan oo Qurbo-joog ah ayaa imanaya Itoobiya,” ayay tidhi haweenayda yar ee ay la hadashay.
Dacwad oogayaasha ayaa ku andacoonaya in xayiraada lagu soo rogay iyaga iyo in hantidooda lala wareegay tan iyo bishii December 16, 2014kii.
Mesfin Arsado waxa uu ku andacoodey in uu mudo 8 sano ah maamulayey shirkad kabo nadiifisa (Listro), balse dhawaan ayey boolisku shaqada ka eryeen kadib markii ay yimaadeen qurbaha, alaabtiina laga qaatay.
Xildhibaanadu waxa ay leeyihiin “ Joogitaankaaga halkan uma fiicna Qurba-Joogta, waayo Qurba-joogtii ayaa soo gali doonta”. Faqrigeena maaha mid qurbaha ka qarsoon,” ayuu yidhi.
Waxa uu intaa ku daray oo uu yidhi, “Sanad kasta laba ama saddex jeer xeerku alaabtayada ayaa naga qaada; Aniga naftayda laba jeer ayaan soo xidhay liiska alaabtayda.
Waxaan soo iibsaday shaygan, ma aha mid la xaday, laakiin kabo kabo ah.
Laakin markii la i xiray, waxaa la ii tixgaliyay dambiile. Mesfin, ayaa sheegay inuu kaydsaday 1,200 oo Birr oo Canvas ah iyo Midabka Kabaha ka dib imaatinka Qurba-joogta, waxa uu xusuustaa in sannadihii 2010 iyo 2013 lagu xukumay ganaax dhan 14,000 oo Birr.
Shakhsigu waxa uu ka cawday in uu dawladda u gudbiyay dacwad ah in hantida la iga haysto loo soo celiyo, balse waxa uu ku cawday “Xeerku waxa uu si gaar ah u soo galay hantidayda”.
Inkastoo imaatinka qurba-joogta ee dalka Itoobiya ay door muhiim ah ka qaateen sidii looga gudbi lahaa caqabadaha ka jira dalka, haddana shaqo ka joojinta dhalinyarada ayaa saameyn ku yeelatay qoysaskooda.
Sidoo kale, Rebekah Woldekidan, hooyo, waxay carruurteeda ku maamushaa dakhliga Lystro, waxayna sheegtay in laga mamnuucay inay ilaalo ahaan ka shaqeyso tan iyo December 16, 2014.
“Labo carruur ah ayaan wax baraa, waxaanan ku bixiyaa 2,500 oo birr oo kiro ah wixii aan ka helo Listro.
Maan qaban karin shaqo kale sababtoo ah waxaan dhashay laba jeer intii lagu jiray qaliinka, “ayay tiri Rebekah.
Maya, wiilkaygu wuxuu ka yimi dugsiga oo wuxuu ku yidhi, ‘hooyo, cunto i sii. Maxaan siin karaa isaga? Maxaan sameeyaa?
Rebeqah waxay waydiisatay dawladda xalinta dhibaatada.
Rebeqah waxay ku andacoonaysaa inay la wareegtay liiskeedii alaab (kursi, burush, looxa) iyo kuwo kaleba waa laga qaatay.
xageen tagnaa Maxaan sameynaa? Sideed u shubtaa liiskayada alaabta alaabada? Rebekah waxay tiri waa in dowladdu ay na siiso xal degdeg ah.
Dhallinyaradii shaqada laga joojiyey, hantidoodiina laga qaatay, waxaa kaloo la sheegay in la xidhay kuwii dalbaday in aan hantidayada la qaadan.
Way na dhaceen, iyagoo leh, halkan kama shaqayn kartid.
Saddex ka mid ah saaxiibaday, oo ku murmay sababta loo kaxaystay, ayaa la dhacay oo xabsiga la dhigay,” ayuu yidhi.
Agagaarka Zurich, Aabihii ayaa sheegay in muddo lix sano ah uu maamulayay carruurta geeriyootay isagoo iibinaya shaaha iyo bunka, wuxuuna ka cawday in hadda loo sheegay inuu shaqada joojiyo.
Dadkii cabanayey ee ay subaxdii dambe la hadashay waxay ku yidhaahdeen, sidee masaakiinta loogu eryi karaa Qurba-joogta imanaysa Christmas-ka? Waxay weydiiyaan. Dadka ka faalooda arrimahan oo sheegay in ay cabasho u gudbiyeen hay’adda ay khusayso, ayaa sheegay in loo sheegay in aysan shaqo bilaabi karin muddo 15 maalmood ah, isla markaana aysan soo celin doonin hantidii ay ka qaateen.
Total views : 7512554